भेनेजुएला - ALinks
भेनेजुएला मा काम खोज्दै हुनुहुन्छ? कसरी एक प्राप्त गर्नुहोस्
नोभेम्बर 21, 2020 मैत्री झा जब, भेनेजुएला
भेनेजुएला मा काम खोज्दै हुनुहुन्छ? वा भर्खरै भेनेजुएलामा सर्नुभयो? हामी तपाईंलाई यो फेला पार्न मद्दत गर्न सक्दछौं। देश पेट्रोलियम उद्योगको लागि प्रसिद्ध छ। साथै, यो विश्वभरि १ most सबैभन्दा बढी मेगाडिभरसी देशहरूमध्ये एक हो। जस्तो, यो
भेनेजुएलान्स? शरण संरक्षणको लागि कसरी आवेदन गर्ने भनेर जाँच गर्नुहोस्
अप्रिल 22, 2020 Demi शरणार्थीहरू, भेनेजुएला
यूएनएचआरसीका अनुसार भेनेजुएलाका मानिसहरु आफ्नो देश छोडदैछन्। तिनीहरू यो हिंसा, असुरक्षा र धम्कीको वृद्धिका कारण गरिरहेका छन्। साथै, त्यहाँ खाद्यान्न, औषधि र अत्यावश्यक सेवाहरूको अभाव भइरहेको छ। UNHRC रिपोर्टबाट
भेनेजुएला भिसाको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्!
अप्रिल 22, 2020 करुणा चन्दना भेनेजुएला, भिसा
भेनेजुएला दक्षिण अमेरिकाको उत्तरी तटमा अवस्थित छ। करीव 3.7 करोडको जनसंख्याको साथ, यो तेल, सुन्दर महिला, स्टार फल्स, र बेसबल खेलाडीहरूको लागि लोकप्रिय छ। यदि तपाईं भेनेजुएला भ्रमण गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने। छुट्टी, अनुसन्धान, व्यापार बैठक, र
भेनेजुएला मा विश्वविद्यालयहरु
फेब्रुअरी 4, 2020 मैत्री झा अध्ययन, भेनेजुएला
भेनेजुएलामा अध्ययन गर्ने योजना बनाएका भेनेजुएलाका शीर्ष सात विश्वविद्यालयहरूमा एक नजर राख्नुहोस्। भेनेजुएलामा शीर्ष विश्वविद्यालयहरू topuniversities.com अनुसार, भेनेजुएलामा universities वटा विश्वविद्यालय छन् जुन क्युएस ल्याटिन अमेरिका युनिभर्सिटीले युनिभर्सिटी रैंकिंग (२०१ 2018) मा स्थान पाएको छ।
भेनेजुएलामा अस्पतालहरूको सूची
फेब्रुअरी 2, 2020 मैत्री झा स्वास्थ्य, भेनेजुएला
भेनेजुएला स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई दुई वर्गमा व्यापक रूपमा बाँडिएको छ जुन सार्वजनिक र निजी क्षेत्रहरू छन्। त्यहाँ लेख र स्थान नम्बरको साथ अस्पतालको सूची यस लेखमा प्रदान गरिएको छ। युनिवर्सिटी अस्पताल - माराकाइबो अस्पताल लुइस रजेती - बारिनस
भेनेजुएलामा बैंकहरूको सूची
फेब्रुअरी 1, 2020 मैत्री झा पैसा, भेनेजुएला
भेनेजुएलाको विशाल वित्तीय प्रणाली छिटो बृद्धि भएको छ। त्यो १ 1950 .० र १ 1980 s० को बीच थियो। यसले यसको संस्थाको व्यावसायिक अस्तित्वको विशेषता दिन्छ। १ 1989 41 In मा, वित्तीय सेवा क्षेत्रमा commercial१ वाणिज्य बैंकहरू थिए। २ government सरकारी वित्तीय संस्था,
भेनेजुएलामा बस्ने लागत
फेब्रुअरी 1, 2020 मैत्री झा यात्रा, भेनेजुएला
यदि हामीले भेनेजुएलाको बारेमा कुरा गर्‍यौं भने बाँच्नको लागत एकदमै महत्त्वपूर्ण कारक हो, संयुक्त राज्य अमेरिकामा बस्ने खर्चको तुलनामा यो सस्तो छ तर अझै पनि, नम्बरको अनुसार भेनेजुएलामा बस्ने लागत ११..11.58% बढी छ
भेनेजुएला यातायात प्रणाली
फेब्रुअरी 1, 2020 मैत्री झा नजिकिदै गर, भेनेजुएला
भेनेजुएलामा तपाईले कुनै ट्रेन भेट्टाउनु हुन्न तर हो त्यहाँ धेरै बसहरू छन् ताकि तपाई देशभित्र बस, कार र ट्याक्सीहरू सहित सजिलै यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ। यो तपाइँको पहिचान कार्ड लाई निरन्तर बोक्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ, जस्तै
भेनेजुएलामा किनमेल गर्दै
जनवरी 30, 2020 Demi के कुराहरू, भेनेजुएला
हामी आफैंलाई केहि नयाँ स्थानमा लैजान सक्दैनौं जहाँसम्म हामी लिन चाहान्छौं र त्यो त्यस्तै देश / शहरको वरपर वा अवस्थित मल्लहरूको बारेमा ज्ञान हुनु धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसमा